ဖြစ်ရပ်မှန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဖြစ်ရပ်မှန်
Posted by မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု on Oct 16, 2010 in News | 8 comments
တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း ဟူသော စကားပုံသည်လော ဆိုရိုးသည်လော ထိုသောဝေါဟာရသည် လွန်စွာအံ့မခန်းမှန်ကန်လွန်းလှပါတော့၏။
ကျွန်ုပ်အဝင်ပါဖြစ်သော သက်ရှိလူသားတို့ သည် မိမိတို့မှီတင်းနေထိုင်ရာ ပထဝီ ရေမြေကိုလိုက်၍ ဒေသခံတို့ ၏ ဓလေ့စရိုက်နှင့် အမူအကျင့်တို့ သည် မြားမြောက်စွာ ကွဲပြားခြားနားကြကုန်လေ၏ ဆိုခြင်းကို အထူးရည်ညွန်းရန် မလိုအပ်လှပေ။
ဒေသအရပ်တစ်ခုမှသည် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတို့ ၏ ဓလေ့စရိုက်တို့ သည် ရံခါတွင် လွန်စွာမှ ဆန်းပြားကြကာ လားလားမှ စေ့စပ်၍မရလောက်အောင်လည်း ကွဲပြားခြားနားကြကုန်၏။
ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ ငိုအားထက်ရီအားသန် လား ရီအားထက်ငိုအားသန် လား တော့မသိ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်မိတာကတော့ အမှန်ပါဘဲ။ လူတို့ ၏သဘာဝအရ စား၊ဝတ်၊နေရေး ဆိုတဲ့ အကြောင်းသုံးပါးထည်းက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အဟာရကိုမှီဝဲပြီးလျှင် ဒီတိုင်းနေလို့ မရတဲ့ကိစ္စကတော့ဖြင့် အိမ်သာတက်ရခြင်းပါဘဲ။
အိမ်သာတက်ခြင်းအမှုကို ပွဲတော်တစ်ခုအလား စည်စည်ကားကား ကျင့်ပကြတဲ့ ရွာသားအချို့ ကို မိမိကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးပါတယ်လို့ပြောရပါလျှင်တော့ ယုံကြည်နိုင်ကြပါမည်လား?။ ကျွန်တော့်အသက် ခပ်ရွယ်ရွယ်လောက်တုန်းကပါ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ တောမကျ မြို့ မကျ ရွာကြီးတစ်ရွာကို ကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားခဲ့ဘူးပါတယ်။
အဲ့သည်ရွာကြီးမှာ ကားလမ်းမှသည် မီးရထားလမ်း ပင်လယ်ရေတက်ရေကျ ချောင်းကြီးများအထိ ရှိကြပါ၏ စီးပွားရေးလည်းအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး စည်စည်ကားကား ရှိလှတဲ့ ရွာကြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ပင်လယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ကြခြင်းကို အထူးပြုလုပ်ကြပြီး ရာဘာစေး၊သစ်၊ဝါး အစုံလည်းထွက်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့ ပွဲတော်က လူစည်ကားရာ ရွာလည်ခေါင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ရွာရဲ့ အနောက်ဘက်အစွန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သင်္ချိုင်းကုန်းအနီးမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြေ တစ်ရာကျော်ကျော်လောက်ရှိတဲ့ အုပ်စုကလေးမှာပါ။ အခြာသောအစွန်းပိုင်းတွေတော့ ကျွန်တော်မသိပါ။ ထိုအိမ်စုများမှ အနောက်စူးစူး ပင်လယ်ဘက်သို့ ပေါက်သော လမ်းဘေးတွင် ဆားဂိုဒေါင်ကြီးများ နှင့် သင်္ချိုင်းကုန်းသည် တည်ရှိနေပါ၏။ ထိုအိမ်စုတို့ သည် ကွက်သစ်သဘောမျိုးဖြစ်ကာ အိမ်တိုင်းတွင် အိမ်သာမရှိကြပေ ရှိသောအိမ်သာများသည်လည်း အရေးပေါ်ကိစ္စတွက် တည်ဆောက်ထားခြင်းသာဖြစ်ကြကုန်၏။ အကြောင်းမှာ ပင်လယ်ရေနီးပိုင်း မြေဖြစ်၍ သုံးပေခန့် မျှတူးလိုက်လျှင် ရေငန်များထွက်လာကာ တွင်းပြိုကျသောကြောင့်ဖြစ်၏။ အကယ်၍ အိမ်သာကျင်းနက်နက်တူးပြီး ကောင်းကောင်းလုပ်လိုလျှင် ဆားငန်ရေခံနိုင်သော အုပ်၊အင်္ဂတေ တို့ ဖြင့် အခိုင်မာတည်ဆောက်ရသောကြောင့် ငွေကြေးကုန်ကျမှု အခက်ခဲရှိကြရ၏ ထို့ ကြောင့်ပင်လျှင် ထိုပွဲတော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ်လေသည်။
ကျွန်တော်က အဲ့သည်ဒေသက ဆားတွေကိုဝယ်ပြီး မြန်မာပြည် အထက်ဘက်ကို
ပို့ တဲ့ သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်စီမှာ ပညာသင်တစ်ဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် ကျွန်တော့်အလုပ်က ဝယ်လိုက်တဲ့ဆားတွေရဲ့ အလေးချိန်နဲ့သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးတွေကို ကြပ်မတ်ရတဲ့အလုပ်ပါ။ တစ်နေ့ အရောင်းဝယ်တည့်သွားကြလို့ဆားတွေရဲ့အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးဘို့ဆားဂိုဒေါင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ ဒီပွဲတော်ကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်ခဲ့ရတာပါဘဲ။ ဂိုဒေါင်ကြီးတွေရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ဆူးညောင့်ခလုပ်တွေကို အထပ်ထပ်ကာရံထားတာဟာ ခံတပ်ကြီးလားထင်မှတ်ရပါတယ် ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ ဆားကိုမည်သူမျှဂိုဒေါင်ဖောက်၍မခိုးကြောင်းနှင့် ဤကဲ့သို့မကာရံထားပါက ဂိုဒေါင်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ သက်တောင့်သက်သာနှင့် အိမ်သာလာ၍တက်ခြင်းအမှုကို ပြုကြပါလျှင် အလုပ်လုပ်၍ ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုသိခဲ့ရပါတယ်။
ထိုနေ့နေ့ လည်ချိန်များတွင် မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စတို့ သည် ဆားကွင်း နှင့် သင်္ချိုင်းကုန်းတော၏အစပ်တွင် ထီးကလေးများကာ၍ အိမ်သာတက်နေကြသည်ကို လှမ်း၍မြင်မိပါလျှင် ကန်တော်ကြီးနှင့် တိရိစ္ဆာန် ဥယျဉ်တို့ ၌ စုံတွဲများ ထီးကာ၍ထိုင်နေကြပုံကိုမြင်ယောင်မိပြီး ပြုံးလိုက်မိပါသေးသည်။
ညနေငါးနာရီခန့် မှာ ပျိုပျိုအိုအို ယောက်ကျား မိန်းမ လူကြီး ကလေး အရွယ်မျိုးစုံတို့ ဟာ တစ်ဦးချင်းမှသည် နှစ်ယောက်တွဲ သုံးယောက်တွဲမှ လေးငါးခြောက်ယောက်တွဲအထိ အုပ်စုဖွဲ့ ကာ သင်္ချိုင်းကုန်းတောစီသို့အိမ်သာတက်ပွဲတော်ကို ချီတက်ကြလေကုန်၏။
ကျွန်တော် ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လွန်း၍ အလွန်အမင်အံ့သြရမိခဲ့၏။ ကျွန်တော့်ထက်အသက်အနည်းငယ်စီကြီးသော ဒေသခံကုန်တင်ကုန်ချ အဖွဲ့ များက ကျွန်တော့်အား ကြုံဘူးရန် တူတူသွားကြပါမည်ကြောင်း ဖိတ်မန်တကပြုသောအခါ သူတို့၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံလိုက်ပြီး သူတို့ နှင့်အတူ ချီတက်လေတော့၏ သင်္ချိုင်းကုန်းတောကြီးသည် အတော်ပင်ကျယ်ဝန်းလှပေရာ အထည်းသို့ ရောက်လျှင် ဝဲယာအရပ်တို့ ဖြင့် သူ့ နည်းသူ့ ဟန် ကျား၊မ ခွဲထားကြပုံရ၏။ ကျွန်တော် တစ်ဖက်သို့စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်သောအခါ အချို့ အမျိုးသမီးများသည် လမ်းများပေါ်တွင်ရပ်နေပြီး ကိစ္စမပြီးသေးသည့် အဖွဲ့ သားများကို စောင့်နေကြဟန်ရှိ၏။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ သည် အတွင်းပိုင်းသို့ ဆက်လက်ချီတက်ကြမိသောအခါ ခြုံတောကလေးဘေး၌ အသက်ခပ်လတ်လတ် လူသုံးယောက်သည် တန်းစီ၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ အိမ်သာတက်ခြင်းအမှုနှင့်အတူ အကြောင်းရာတစ်ခုကို ၄င်းတို့ ၏ ဘာသာစကားဖြင့် သူ့ ထက်ငါ အော်ဟစ်ကာ အားရပါးရ ဆွေးနွေးနေကြသည်လား ငြင်းခုန်နေကြသည်လား ကျွန်တော်နားမလည်ပါ သူတို့ ကိုကြည့်ရသည်မှာ အိမ်သာတက်သည်နှင့်မတူဘဲ လက်ဘက်ရည်ဝိုင်းတွင် စကားစမြည်း ပြောနေကြသည်နှင့်ပင် လွန်စွာတူတော့၏
ကျွန်တော့်မှာမူ ပဆိုးကို ခြုံထားပြီးလျှင် နှခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တို့ အား ပဆိုးစဖြင့် ကာထားပြီး မျက်လုံးနှလုံးကိုသာဖော်ထား၏။ ခပ်လှန်းလှန်းတွင်လည်း လူငယ်တစ်ယောက်သည် အုတ်ဂူတစ်ခုပေါ်တွင် အကျအနထိုင်ကာ ဇိမ်ကျနေပုံရ၏ အချို့အုပ်ဂူများ၌ အုတ်ဂူပေါ်တွင် အိမ်သာမတက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံစာများ ရေးထားကြကုန်၏ ထိုစဉ် မှာပင် အဆိုပါသုံးယောက်မှ တစ်ယောက်သောသူသည် ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးထံမှ ဆေးလိပ်မီးတောင်းညှိုလေ၏ သူသည် လွန်စွာ အိနြေ္ဒ ရလွန်းလှသည် အိနြေ္ဒ မရဖြစ်နေသူမှာ ကျွန်တော်သာဖြစ်၏ သူတို့ နှစ်ယောက် ဆေးလိပ်မီး အပြန်အလှန် ညှိုပြီးလျှင် ထိုလူမှ ကျွန်တော့်အခြေအနေကိုကြည့်ကာ အဝယ်တော်စာရေးလား ဟုမေးသောအခါ ကျွန်တော်ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည့်အခိုက် ထမင်းစားပြီးပြီလား ဟုမေးလေ၏။
ငုတ်တုတ်ကြီး အိမ်သာတက်နေတဲ့သူက ကျွန်တော့်အားမေးလိုက်သော မေးခွန်းကို ဝိုင်းဝန်း၍သာ စဉ်းစားကြည့်ကြစေချင်ပါသည်။ အားလုံး၏မျက်နှာများကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဘာမှထူးထူးခြားခြား မရှိဘဲ ပကတိအတိုင်းသာ ရှိနေကြကုန်၏ ထိုသူကျွန်တော့်အား လှောင်ပြောင်ခြင်းမဟုတ်ပေ ဤသည်က သူတို့၏ ဓလေ့ပင်လော?။
( ထိုဒေသရှိသူတို့ သည် နံနက် ခြောက်နာရီ ခုနစ်နာရီခန့် တွင် နံနက်စာ စားကြပြီး ညနေ လေးနာရီ ဝန်းကျင်တွင် ညနေစာ ကိုစားကြ၍ ငါးနာရီ ခြောက်နာရီ ခန့် တွင် ထိုချီတက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပကြလေ၏။ ဤသည်မှာ နှစ်အတန်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါ၍ ယ္ခုအခါတွင်မူ ထိုသူတို့ ၏ဓလေ့တို့ သည် ရှိတော့လိမ့်မည်မထင်ပါ။ အကယ်၍ ထိုဒေသမှ လူ တစ်ယောက်ယောက်သည်၎င်း ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကြုံကြိုက်ဘူးသူတစ်ယောက်ယောက်သည် ဤယ္ခု ကျွန်ုပ်ရေးသားထားပါသော ပို့ စ် လော စောင်းပါးလော မသိသော ဤစာကြောင်းများကို ဖတ်ရှုမိပါလျှင် ပြုံး၍နေမိလိမ့်မည်ဟုမူ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိပါသည်။)
( အရပ်ဒေသကိုမူ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မဖော်ပြတော့ပါ )
ဆြာပု က ဒီတခါတော့ အတည်ရေးတာဘဲ.. အဲဒီလို နေရာမျိုး ရှိတယ် ထင်တယ်.. အရင်က နယ်တွေ ခဏခဏ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဆင်းရတဲ ဦးကြီး တယောက်ပြောဘူးတာ ကြားဘူးတယ်.. သူပြောတာ ဘယ်မြို့လဲတော့ မသိတော့ဘူး ငယ်လွန်းလို့ မမှတ်မိဘူး.. အကြောင်းအရာကိုသာ မှတ်မိနေတာ.. ဦးပု ရေးတာနဲ့ တော်တော် နီးစပ်တယ်။ ဒီလိုတော့ စာတွေ ပေတွေ မဖွဲ့ဘူးပေါ့..ညနေ ၅နာရီ ၆ နာရီ မမှောင်ခင်မှာ စကောလေးတွေ ကိုင်ပြီး ရွာ အပြင်ထွက်ကြတယ် လို့ ပြောတာ..
ခုမရှိတော့ဘူးဗျ နာကစ်တုန်းကပါသွားတာ လူတွေရော ဂူတွေရော အပင်တွေရော ပျောင်သလင်းခါသွားတာဘဲ….
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. နာဂစ် ဆိုလို့ နာဂစ် ဇတ်လမ်းလေး တခု ရေးထားတယ်။ အားပေးအုန်းနော်
ချီတက်ကြတဲ့အခါ မိုင်းတွေဘာတွေ မနင်းမိဘူးလားခင်ဗျ
တစ်ဖြည်းဖြည်း နယ်ကျွမ်းသွားတဲ့ အတွက် မနင်မိတာလားခင်ဗျ
အကိုကော မိုင်း ဘယ်နှလုံး ထောင်ခဲ့ပါသလဲ ခင်ဗျ..။
ရွံ့ရမလို ရီရမလို၊ ဆရာပုရဲ့ ယိုချက်နဲ့ရိုက်ချက်ကတော့ ပြင်းပါ့ဗျာ။ နာဂစ်ဝင်မွှေသွားလို့ အဲဒါတွေ ပြောင်သလင်းခါသွားပြီဆိုတော့ ဘယ်ကိုများ တစစီလွှင့်သွားကြလဲ မသိဘူးနော်။
ဟင် အိမ် သာ ဆောက် ဖို. နေ ရာ မ ပေး နိုင် လို. နဲ. တူ တယ် နော် ။